यदि तपाई छिटो गर्भधारण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस्
हामी मध्ये धेरैले सि फुड अर्थात सामुद्रीक खानेकुरा स्वादको लागि मात्रै खान्छौं । सौन्दर्यका लागि पनि सि फुडले फाइदा गर्छ । सि फुडमा पाइने प्रोटिनका कारण कपाल तथा छालाको सुन्दरता बढाउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर सि फुड छिटो गर्भधारणका लागि उपयोगी भएको कुरा हालैको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । सि फुडले प्रजनन् […]
चुम्बनलाई प्रेम र आर्कषणको प्रतिक मानिन्छ । यो एउटा त्यस्तो प्रतिक हो जसले आपसी सम्बन्धलाई जोडिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ, एक किसले तपाईमा ८० लाख ब्याक्टेरिया एकसाथ सार्न सक्छ । नेदरल्याण्डमा वैज्ञानिकहरुले गरेको एक रिसर्च सर्वेले एक व्यक्तीले अर्को व्यक्तिलाई किस गर्दै गर्दा १० सेकेन्डमा ८ करोड ब्याक्टेरिया आदन-प्रदान हुने […]
एजेन्सी, धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला (सेक्स)यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा […]
सेक्स गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तुष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुबैले धेरै मेहनत गरिरहेको हुनसक्छ । सेक्सपछि गरिने गल्तीहरुले तपाईको पूरै सेक्स लाइफलाई नै बरबाद गर्न सक्छ । सुतिहाल्नु धेरैजसो जोडिहरु यी समस्याहरुबाट ग्रसित छन् । सेक्सपछि धेरै जोडिहरुको पार्टनर निदाइहाल्ने बानी हुन्छ जसले गर्दा सेक्सको मुड नै खराब हुन्छ । सुतिहाल्ने बानीले गर्दा […]
यौन सम्पर्क एक मानिसको लागि आवश्यक कुरा हो यो युवादेखि बृद्ध, बृद्धासम्म गर्ने एक खालको शारीरिक कसरत भनेपनि फरक पर्दैन नेपाली समाजले स्वीकार नगरे पनि यो सबैले गर्दै आएको कुरा हो । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको […]
थाहा पाउनुहोस्, डेलिभरी भएको कति दिन पछि यौन सम्पर्क गर्ने ?
हरेक मानिसको जीबनमा यौन सम्पर्क अति आवश्यक कुरा हो मानिसले यसलाई राम्रो नजरले नहेरे पनि जो कोहीलाई पनि आवश्यक पर्छ तर यौन सम्पर्क पनि विभिन्न समयमा गर्न उपयुक्त मानिदैनन् जुन कुरा हामी यहाँ कुरा गर्छौं । चिकित्सकहरुका अनुसार डलिभरी पछि यौन सम्पर्क गर्नको लागि महिलाको लागि ४ देखि ६ महिना आराम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । […]
थाहा पाउनुहोस्, सेक्स गरेर दिनको सुरुवात गर्दाका शारिरीक फाईदाहरु
रातिको समयमा मात्र सेक्स गर्ने चलन भएकाले पनि यस्तो लागेको हुनसक्छ । तर, चिया वा कफिको कपको सट्टा सेक्स गरेर दिनको सुरुवात गर्दा धेरै शारिरीक फाईदा हुने बताइएको छ । यसलाई दिनको सुखद् र सकारात्मक सुरुवातको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । फाईदा रातभरीको सुताईले दिउँसभरीको थकान मेटिसकेको हुन्छ । यौन जोडीको शरीरले बिहानसम्म गतिलो आराम […]
थाहा पाउनुहोस्, सन्तुष्टिका लागि पुरुष यौनाङ्ग कत्रो हुनुपर्छ ?
वैज्ञानिकहरुले सेक्समा सन्तुष्टिका लागि लिंगको औसत आकारका बारेमा नयाँ तथ्य अगाडि ल्याएका छन् ।युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया र युनिभर्सिटी आफ न्यू मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरुको एउटा समूहले हालसालै एक अनुसन्धान गरेका थिए । यस अनुसन्धानमा उनीहरुले १८ देखि ६५ वर्षका ७५ महिलाहरुलाई सहभागी गराएका थिए । र उनीहरुको अगाडि लिंगको ३३ थ्रि-डी मोडेल राखेका थिए । यी सबै […]
थाहा पाउनुहोस्, सेक्समात्रै होईन, यी कारणले महिला‍-पुरुष एकअर्काविना रहन सक्दैनन्
जसरी एक पुरुषलाई जीवनमा महिला साथीको जरुरत पर्छ, त्यसैगरी महिलाहरु पनि पुरुषविनाको जीवन कल्पना नै गर्न सक्दैनन् । केही अपवादहरुलाई छाड्ने हो भने जीवनको कुनै न कुनै मोडमा महिलाले पुरुष र पुरुषले महिला जीवनसाथी बनाउँछन् । किन मानिसहरु विपरित लिंगी पार्टनरविना रहन सक्दैनन् ? विभिन्न अनुसन्धानहरुले पत्ता लगाएका केही कारणहरु शारीरिक सन्तुष्टि र सन्तान उत्पादन […]
सेक्स गर्नु मुटुरोगीका लागि फाईदा, कम गर्छ हृदयघात
सेक्स एक प्रकारको व्यायाम जस्तै हो । यसले आनन्द मात्रै प्राप्त हुने होइन, मुटुलाई समेत फाइदा गर्छ । मुटुरोग विशेषज्ञहरूका अनुसार पुरुष र महिलाबीच सहमतिमा गरिने सहवासले हृदयघातको सम्भावना कम गर्छ । हरेक दिन गरिने यौन सम्पर्क भन्दा हप्ताको दुईदेखि तीन पटकसम्म गरिने यौन सम्पर्कले मानिसको आयु १० वर्ष बढ्छ । अधिकांश मुटुरोगीहरू यौनसम्पर्कले मुटुमा […]
अमेरिकी गाइनोकोलोजिस्टहरु पुरुष र महिलाले के गर्दा बढी सेक्स आनन्द मिल्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै बताइदिन्छन् । अमेरिकी गाइनोकोलोजिस्ट डा. एडम आस्त्रजेस्कीले महिलालाई बढी सेक्स आनन्द कसरी पुग्छ भनेर खुलस्त छन् । उनले भनेका छन्–जुन पुरुषले सेक्स गर्दा युवतीको योनीभित्र रहेको सानो भागमा धक्का दिन्छ, त्यहीबाट महिलाहरू सेक्सबाट चरम आनन्द लिन्छन् । यद्यपी महिलाहरू पुरुषको तुलनामा […]
थाहा पाउनुहोस्, महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ र सुरक्षित दिन कुन कुन हो ?
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ भने कहिले धेरैपटक यौन सम्पर्क हुँदा पनि गर्भ रहँदैन । यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब अण्डासँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र […]
यदि सपनामा यौन सम्पर्क गरेको देखियो भने यस्तो हुन्छ खतरा !
मानिसहरुले विभिन्न किसिमका सपना देख्ने गर्छन् । यीमध्ये केही सपनाको खास अर्थ हुन्छ । केही सपनाको भने उतिसारो महत्व हुँदैन । यदि सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देखियो भने यसको फरक फरक अर्थ हुन सक्छ । यस्तो सपनाको अर्थ यो कुरामा निर्भर गर्छ कि तपाइँको पार्टनर को हुन्छ ? यदि तपाइँ सपनामा अपरिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क […]
८ भदौं, काठमाडौं । पच्चीस वर्षीया बिना (परिवर्तित नाम) अहिले पाठेघरमा सङ्क्रमण भएर उपचाररत छिन् । स्थायी घर मोरङ बताउने उनी हाल काठमाडौँमा बसेर स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पताल थापाथलीमा पाठेघरको उपचारकै क्रममा छिन् । दुई वर्ष पहिले विवाह भएकी बिनाको योजनाबिनै गर्भ रह्यो । श्रीमान् र श्रीमतीबीच तत्काल बच्चा नजन्माउने सल्लाह अनुसार विराटनगर बजारकै […]
बीबीसी, अचानक कसैसँग यौन सम्पर्क भयो भने त्यसलाई क्याजुअल सेक्स भनिन्छ । यस्तो यौन सम्पर्कमा सहमति र खुशी पनि हुन्छ । क्याजुअल सेक्सपछि युवतीहरुमा खेद, पश्चाताप र हिनतावोधको भावना देखिन्छ । पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसार यदि यौन सम्पर्कको प्रस्ताव युवतीले गरेका छन् भने उनीहरुमा हिनतावोधको भावना देखिँदैन । यसअघिका अध्ययनमा के पाइएको थियो भने ‘वन […]
यौन सम्पर्क गर्दा आपसमा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । अधिकांश महिलाहरू सेक्सबाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत महिलाहरूले आफूहरू चरम आनन्दसम्म नपुगेको बताएका थिए । ८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम […]
एजेन्सी, यौन सम्पर्क राख्दा वीर्य स्खलन हुनुअघि नै केही मात्रामा रहेको सुक्रकीट योनिमार्गमा रह्यो भने पनि गर्भ रहन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा गर्भ रहन नदिन के गर्नुपर्छ ? धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ । गर्भधारणका लागि एउटा शुक्रकिट चाहिन्छ तर एकपटकको वीर्य स्खलनमा लाखौ शुक्रकीट निष्कासन हुन्छन् । कुनै–कुनै अवस्थामा वीर्य स्खलनभन्दा अघि पनि केही मात्रामा […]